Indawo ofuna ukuhlala kuyo ixesha elide eTaean Seaside - I-Airbnb
Indawo ofuna ukuhlala kuyo ixesha elide eTaean Seaside
Geunheung-myeon, Taean-gun, South Chungcheong Province, South Korea
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWonyoung
Le yiklabhu yegalufu esasazwe kwibala legalufu leendawo zokuhlala ngempela-veki.
Ime phambi kwebala legalufu, ngoko imbonakalo yegalufu iphandle efestileni njengegadi, kwaye ulwandle lwaseNtshona lukumgama weemitha eziyi-150.
Kufuphi, ungonwabela ukutya kwaselwandle okufreshi eShinjindo, edibene neAnheung Port ngebhulorho, uze ubone izinto ezahlukahlukeneyo ezihonjisiweyo kwiMyuziyam yaseShinjindo Maritime esandul 'ukuvulwa.
Unokufumana iindawo ezininzi zokutyela kwi-Hanaro Mart ekufutshane eSinjindo okanye kwindawo ephakamileyo, kwaye indawo yokuhlala ayidli ngokuhlala abantu abaninzi, nto leyo eyenza ibe yindawo entle yokuhlala nentsapho yakho ixesha elide. I-Wifi iyafumaneka ukukunceda ufumane umsebenzi odingayo, ngoko yindawo entle yokudibanisa ukuhamba nomsebenzi usekhaya kunye ne-coronavirus.
Igama lendawo yokuhlala yi-Opera House. Ibizwa kuba kukho imithi emininzi yeenkamela ejikeleze le ndawo. Ukuba usebenzisa iindlela zokunyuka intaba ukuze unyuke iintaba, ungafikelela kunxweme olunentlabathi emhlophe kwimizuzu eyi-30. Kakade ke, ungadlula nakwiindawo ezingaphandle ukuze ufike elunxwemeni ngokukhawuleza. Unokucinga ngendawo yokuhlala njengeflethi okanye indlu ekwicomplex engahlali abantu abaninzi ngaselwandle.
I-Taian Peninsula ngummandla ocebileyo kwimfuyo, ukutya kwaselwandle kunye neemveliso zokulima, ezinqabileyo kwelo lizwe.
Emva koko kukho kuphela ipaki yesizwe ngaselunxwemeni kuLwandle Olusentshona. Ukuba uhamba ngemoto imizuzu eyi-10 ukusuka eShinjin-do, ukuhamba ngenqanawa usuka apho unokubuka khona ipaki yelizwe.
Umbuki zindwendwe ngu- Wonyoung
Iilwimi: English, 한국어
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Geunheung-myeon, Taean-gun